အခြားကလပ်မှ PSG အသင်းMbappé - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ • စာမျက်နှာတိုင်း • သတင်းဝေ • အာဖရိကဖိထားပါ • အားကစားများ အခြားကလပ်ဖို့ "PSG အသင်းMbappé
default site ကို 21 မေလ 2019
အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလက်ဆောင်တစ်ခုအဖြစ်တစ်ဦးကဆန္ဒခံယူပွဲတွင်? Kylian Mbappéအကောင်းဆုံးကစားသမားနှင့် 2018-2019 ရာသီအတွက်ပြင်သစ်၏ချန်ပီယံရှစ်၏အကောင်းဆုံးမျှော်လင့်ချက်အားဖြင့်အရွေးခံရ၎င်း၏အနာဂတ်အပေါ်အချို့သံသယထွက်ခွာအားဖြင့်ပရိသတ်ကိုအံ့အားသင့် PSG အသင်းUNFP ဆုဖလားမှာတနင်္ဂနွေ။
သူကကိုယ့်ရှေ့တော်၌ PSG အသင်းမှာမိမိအနာဂတ်နှင့်ပတ်သက်ပြီးအလွန်လင်းမှုမရှိခဲ့သည့်အခါပြင်သစ်ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံဟောင်း 20 နှစ်ပေါင်းညနေပိုင်းတွင်, တူညီတဲ့ရာသီအတွက်နှစ်ဦးစလုံးတစ်ဦးချင်းဆုအနိုင်ရသမိုငျးတှငျပထမဦးဆုံးကစားသမားတစ်ဦးမျှော်လင့်မထားတဲ့အလှည့် ယူ. , ပိတ်ပွဲအခမ်းအနား။ "ဒါကငါ့အဘို့အရေးပါတဲ့အခိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ ပိုပြီးတာဝန်ရှိသည်ဖို့လာသောအခါငါ၏အအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်တစ်ဦးကအလှညျ့အပွောငျး။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင် PSG အသင်း, ဖြစ်ကောင်းတခြားနေရာ "ဟုသူကပြင်သစ်၏ချန်ပီယံ၏အကောင်းဆုံးကစားသမားများအတွက်ဖလားကိုလက်ခံရရှိပြီးနောက်ယခုလိုအသေးစားပိန်အားကစားထအော်လိုက်တယ်။
"ငါ့ကိုအဘို့, အဲဒါကိုပြောဖို့အချိန်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်မအနေနဲ့ integer ဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့: ငါတစ်ခုခုပြောသည့်အခါ, ငါထင်ပါတယ်။ ဒါဟာလို့ပြောပိုင်ခွင့်အချိန်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အဲဒီမှာငါကလည်း! တာဝန်ဝတ္တရား "" သူကပိုရှိသည်အားမိမိအလိုဆန္ဒထပ်လောင်းအတည်ပြုပြောကြားခဲ့သည်, မိနစ်အနည်းငယ်အကြာတွင်အဆိုပါရောနှောဇုန်ကပြောပါတယ် "။ "ဒီ, PSG အသင်းမှဤမျှလောက်ပိုကောင်းသည်ဆိုပါက။ ဒါကြောင့်အခြားနေရာများတွင်ဖွင့်ပါကအသစ်တခုကိုစိန်ခေါ်မှုများအတွက်တခြားနေရာဖြစ်လိမ့်မည်သူ Parisian ကလပ်နှင့်အတူစာချုပ်သက်တမ်းတိုးမြှင့်ဆွေးနွေးပွဲတွေအတွက်ဖြစ်လိမ့်မယ်အဖြစ် "ဟုသူကအများအပြားမီဒီယာသည်နှင့်အညီ, သုံးသပ်ခဲ့သည်။
မတ်လလ၌သူ၏အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ထင်ကြေးရှင်းလင်းရန်ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးကိုဖန်ဆင်း Parisian တိုက်စစ်မှူးအနေဖြင့်ရုပ်ရှင်ရုံတစ်နည်းနည်း, ချန်ပီယံလိဂ်ဆန့်ကျင်၏ဖျက်သိမ်းရေး 8e ဖိုင်နယ်လ်ပွဲစဉ်အပြီးနေ့ကို TF1 ထုတ်လွှင့်အင်တာဗျူးအတွက်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်။
မေးခွန်းစေရန်, "သင်ပဲရစ်လာမယ့်ရာသီဆက်နေရန်သွားပါသလား? "သူကပြန်ဖြေတယ်:" ငါတောင်သေချာဘို့ရှိပါလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။ ဒီစွန့်ပစ်မှုနှင့်အတူ, ဒီပေးသွားနိုင်လိမ့်မယ်သမျှသောပြဿနာများ, ငါ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအခြေအနေပိုမိုပေါင်းထည့်ရန်ကြွလာအဘယ်သူမျှမသုံးစွဲခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကရှင်းပါတယ်နှင့်တိကျမှန်ကန်သည်။ "
သူသည်ဦးစားပေးပစ်မှတ်တစ်ဦးအဖြစ်ကိုးကားသည်အဘယ်မှာရှိရီးရဲလ်မက်ဒရစ်၏ဘေးထွက်အပါအဝင်ဒီလွှတ်ပေးရန်, ကောလဟာလကြိတ်နှင့်အတူ Zinedine ဇီဒန်း နွေရာသီအပြောင်းအရွှေ့ window ကိုအဘို့, ပြန်လည်စတင်နေသည်။
အရှေ့အာဖရိကတန်ဇန်းနီးယားမှာရှိတဲ့နှင်း - ဗီဒီယို
ကင်မရွန်း - ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ: ဖီဖာကသူ့မွေးနေ့၏အခါသမယအပေါ်ရော်ဂျာ Milla ကျင်းပ67è